Manchester United maku guuleysan kartaa Horyaalka?
Xilli ciyaareed caadi ah oo seddex dhibcood ku hogaaminaya ka dib 17 kulan lama soo hadal qaadin, laakiin xilli ciyaareedkan caadi ma aheyn.
United ayaa haatan hogaanka u heysa Premier League markii ugu horeysay tan iyo 2012, waxaana taas ka sii muhiimsan, horumarkooda lama inkiri karo.
Sidaas oo ay tahay, waxaa jira kuwa su’aal ka keenaya awoodda tababare Ole Gunnar Solskjær, iska indhatiraya dib-u-habeyntiisa muhiimka ah ee kooxda isla markaana soo saara qaab ciyaareedkiisa ugu fiican xiddigaha sida Anthony Marial, Marcus Rashford iyo muddo dheer ka dib Paul. Pogba.
Laakiin si tartiib tartiib ah ayey horumar uga sameeyeen horyaalka labadii sano ee la soo dhaafay waxayna haatan umuuqdaan kuwa ugu yaraan awooda inay u tartamaan horyaalka qeybtii hore ee 2021.
Solskjaer ayaa hoos u dhigay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan horyaalka horraantii toddobaadkan, laakiin hadal haynta ku biirista Manchester United ayaa sii kordheysa habeen dambe.
Waa wado dheer oo loo maro waxayna gacanta sare ka heli karaan kooxaha culus haddii ay ku guuleystaan ​​horyaalkoodii 21aad. Kaliya lix maalmood ka hor, deriska Manchester City ayaa kala go’ay markii ay dib u heleen qaab ciyaareedkoodii oo ay gaareen finalka Carabao Cup.
Axada, waxaa jiri doona faahfaahin buuxda oo ku saabsan haddii United ay ku guuleysan karto horyaalka xilli ciyaareedkan marka ay u safrayaan Anfield si ay ula ciyaaraan Champions League. Barbaraha ayaa ku sii haya kaalinta koowaad; Haddii ay ku guuleystaan ​​lix dhibcood ka horeysa rikoorka iyagoo dhameystiray Liverpool looga adkaaday ciyaar qarsoodi ah tan iyo 2017, waxayna sii wadi doontaa inay sii xoojiso ereyga cinwaanka iyo Red Devils.
40 Weight Loss Guidelines That Aid You Drop Extra Kilos
ECOWAS completes its project to evaluate